सस्तोमा जग्गा नबेचे पछि नाङ्गै बनाएर यसरी कुटे महिलालाई (भिडियोसहित) || सुनौलो नेपाल
सस्तोमा जग्गा नबेचे पछि नाङ्गै बनाएर यसरी कुटे महिलालाई (भिडियोसहित)
दाङ २९ जेठ। सोमबार ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा उजुरी दिन आएकी अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ ठाडोखोला निवासी ३९ वर्षकी दिलमाया पुन शुक्रबार भालुवाङ बसपार्कमा भएको घटना सम्झँदा अझै तर्सिन्छिन् ।
श्रीमान र आफन्तको साथ लागेर पुन प्रहरी कार्यालयमा आफूमाथि कुटपिट गर्ने र अमानवीय व्यवहार गर्नेहरुमाथि कारबाहीको माग गर्न प्रहरी कार्यालय आएकी हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दिलमायामाथि भएको अमानवीय व्यवहार तथा कुटपिट भैरहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कुटपिटमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दबाब परेको हो ।
सोमवार प्रहरी कार्यालयमा महिलाको समूह तथा दिलमायाका आफन्तले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरे । उनीहरुले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्धा दर्ता गर्न प्रहरीलाई दबाब दिए पनि प्रहरीले केही सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरेर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
दिलमायालाई कुटटि गर्ने राप्ती गाउँपालिकाकी ३५ वर्षकी रेखा गुप्ता र २९ वर्षकी अनिता गुप्तालाई पक्राउ गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी प्रमुख रविन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
अर्घाखाँची सितगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ ठाडो खोला निवासी ३९ वर्षकी दिलमाया पुन भालुवाङ्ग पुरानो बजारमा रहेको जग्गा हेर्न आइन् । अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र दाङको राप्ती गाउँपालिका छिमेकी स्थानीय तह हुन् ।
उनको साँधमा पर्ने आफन्तले जग्गा बेचेका थिए । ‘जग्गा बिक्री गर्ने हो, गर्ने भए ५० हजारमा किन्छौँ’ भनेर राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ भालुवाङ्ग निवासी रेखा गुप्ताले दिलमायालाई सोधिन् ।
तर, दिलमायाले ‘यति सस्तोमा बिक्री गर्दिनँ, मेरो जेठाजुको जग्गा सस्तोमा फुत्क्यायौ, मैले चाहिँ बेच्दैनँ’ भन्ने जवाफ फर्काएपछि रेखा गुप्ता, अनिता गुप्ताले कुटपिट गर्न थाले ।
दिलमाया दौडेर पुल्चोक तर्फ अघि बढिन् । निर्माणाधिन बसपार्कमा पुगेपछि उनलाई घेरा हालियो । अनि कपडा च्यातेर नाङ्गै बनाउने प्रयास भयो । लात्तिले हाने । थप्पड हाने ।
कुटपिट हुँदै गर्दा भालुवाङ्ग नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकी र ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल समेत पुगे ।
तर, दिलमायामाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार रोकिएन् । ईलाका प्रहरी कर्यालय देखि पाँच सय मिटरको दूरीमा घटना घट्यो । केही बेरमा प्रहरी घटना स्थलमा पुग्यो ।
घटनाको गम्भीरता नबुझेर मिलापत्र
ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले घटनाको गम्भीरता नबुझेर मिलापत्र गराएको देखिएको छ । प्रहरीले घटना भएकै दिन कुटपिटमा संलग्न र पीडित दुवैलाई सँगै राखेर मिलापत्र गराएको थियो ।
प्रहरीले कुटपिट गर्ने र पीडित दुवैलाई सामान्य झै झगडाको रुपमा हेरेर छाड्यो । तर, घटना घटेको दुई दिन पछि आइतबार भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल बन्यो ।
अनि प्रहरी, भालुवाङ्ग बासी सबै झस्किन पुगे । मिलापत्रको समयमा सामान्य कुटपिटको विषय मानिएको घटना एक महिला माथि गरिएको अमानवीय तथा असामाजिक बन्न पुग्यो ।
भिडियो यसरी भयो भाइरल
प्रहरीले सामान्य घटनाको रुपमा हेरेको भालुवाङ घटना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत तरङ्गीत बन्न पुग्यो । घटना भैरहेको भिडियो एक एक जनाले खोजेका थिए ।